Mpamatsy milina fantsom-boanjo fantsom-boaloboka Flat Die mora vidy | YiZheng
Inona ny masinina Granulator Extrusion Extrusion Granulator?
Masinina Granulator Extrusion Fertilizer Extrusion Flat dia natao ho an'ny karazana sy andiany samihafa. Ny milina granulator maty maty dia mampiasa endrika fampitana mivantana, izay mahatonga ny roller mihodina eo ambanin'ny asan'ny herin'ny friksi. Ny vovo-dronono dia esorina amin'ny lavaky ny milina fanontam-pirinty amin'ny alàlan'ny roller, ary mivoaka avy ao anaty disk ireo pellets vita amin'ny vovo. Masinina Granulator Extrusion Fertilizer Extrusion Flat dia fitaovana lehibe amin'ny indostrian'ny zezika, mety amin'ny famokarana lehibe.
Inona no ampiasaina amin'ny milina Flat Die Fertilizer Extrusion Granulator?
Masinina Granulator Extrusion Fertilizer Extrusion Flat dia natao hamboarina sy ampiasaina amin'ny tsipika famokarana zezika isan-karazany. Ary amin'ny ankamaroan'ny fotoana dia natao hamolavolana azy io sy hampiasana azy amin'ny tsipika famokarana zezika sy ny zezika. Izahay dia toy ny mpanamboatra milina zezika matihanina, tsy vitan'ny manome ny masinina granulator zezika tokana fotsiny isika, fa afaka mamolavola ny tsipika famokarana zezika tanteraka ho an'ny mpanjifa samihafa. Ao amin'ny tsipika famokarana zezika, tokony hasiana masinina granulator zezika miaraka amin'ny milina die granulator matevina sy ny milina mpamorona baolina hahatonga ny granulator zezika ho lasa endrika baolina.
Mandritra ny fiasan-dàlana, ny fitaovana dia apetaka amin'ny farany ambany amin'ny roller, avy eo dia esorin'ny scraper, ary avy eo ao amin'ny polise roa mitambatra, mihodina ao anaty baolina. nyMasinina Granulator Extrusion Fertilizer Extrusion Flat manana ny tombony amin'ny tahan'ny famolavolana pellet avo, tsy misy fitaovana miverina, tanjaka granule avo, boribory fanamiana, hamandoana granule ambany ary fanjifana angovo kely kokoa.
Ireo toetra mampiavaka ny milina fantsom-panafody Extrusion Granulator
1. Ity milina ity dia ampiasaina amin'ny fikarakarana granule ny indostrian'ny zezika biolojika sy ny indostrian'ny fikarakarana feed.
2. Ireo granules namboarin'i Masinina Granulator Extrusion Fertilizer Extrusion Flat manana faritra malama sy madio, hamafin'ny antonony, fiakaran'ny maripana ambany mandritra ny fizotran'izany ary afaka mitazona tsara ny otrikaina amin'ny akora.
3. Granule fanamiana, ny savaivon'ny granula dia azo zaraina ho: Φ 2, Φ 2.5, Φ3.5, Φ 4, Φ5, Φ6, Φ7, Φ8, sns. Afaka misafidy araka ny tena filàna ny mpampiasa.
4. Ny votoatin'ny hamandoana granule dia ambany ary mety amin'ny fitehirizana sy fitaterana, noho izany dia nanatsara ny tahan'ny fampiasana fitaovana.
Endri-javatra amin'ny Flat Die Fertilizer Extrusion Granulator Machine
►Varingana vita amin'ny granule vita.
►Ny atiny biolojika dia mety hatramin'ny 100%, manamboatra granulate organika madio
►Ny fampiasana granule vita amin'ny zavatra biolojika miaraka amin'ny mosaika iraisana ary mihalehibe eo ambanin'ny hery iray, dia tsy mila manampy binder rehefa grotika.
►Miaraka amin'ny granule vokatra maharitra, afaka manala mivantana izy aorian'ny granulation hampihenana ny fihinanana angovo amin'ny fanamainana
►Rehefa tsy mila maina ny taovolo fanamasinana, 20-20 -40% ny hamandoan'ny akora.
Fampisehoana horonantsary Granulator Extrusion Granulator Machine
Safidy maodely ho an'ny fantsom-bokatra Granulator ho an'ny Flat Die
Famokarana (t / h)
Fiakaran'ny maripana (℃)
Teo aloha: Masinina Granulator Zezika Organika & Compound Vaovao
Manaraka: Granulator avo roa heny